कसरी रूममेट समस्याहरू सुरू हुन्छ र तपाईंसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं अन-क्याम्पस छात्रावास वा अफ-क्याम्पस घरमा बस्नुहुन्छ? यदि त्यसो भए, तपाईंले सम्भवतः कसैको साथ कोठा साझा गर्ने अनुभव गर्नुभएको छ।
रूममेट समस्याहरू कसरी सुरु हुन्छ?
रूममेन्ट समस्याहरू सबै विश्वास वा आदरको कमीबाट सुरु हुन्छ, वा कसैको स्वार्थको साथ सुरू गर्नुहोस्, वा तपाईंको वा तपाईंको कोठामै। ' उदाहरणका लागि, तपाईं एक धेरै स्वच्छ र संगठित व्यक्ति हुनुहुन्छ तर तपाईंको रूममेट एक स्लाब हो र सबै कोठा मा छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ?
साधारण अमेरिकी रूममेट समस्याहरू
अर्को विद्यार्थीले अमेरिकी विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको बारेमा "प्रेम" समस्याहरूको बारेमा अर्को विवाद हो। तपाईंको रूममेटले आफ्नो प्रेमिका (वा प्रेमी प्रेमी) लाई आफ्नो कोठामा फिर्ता लिन्छ जहाँ तपाईं घरबाट टाढा हुनुहुन्छ जहाँ पृथ्वीमा सबैभन्दा सजिलो ठाउँ हो। तिनीहरू अदृश्य हुनाले धेरै मनपर्ने चालहरू बनाउँछन्। के यदि तिनीहरूले तपाईंलाई एक रातको लागि अरू र अरूलाई सुत्न पनि बलियो बनाउँछ भने?
विभिन्न कार्यक्रम र बानीहरू
के तपाईं आधी रातको बिहान कक्षामा उपस्थित हुन केही रूखलाई समात्न प्रयास गर्दा तपाईंको मनपर्दो रातो रात देख्दा रातो भए पनि तपाईं आधी रात हुनुहुन्छ? तपाईंको रूममेट तपाईं मा चिन्नुहुन्छ र भन्छन् "एफ-राजा टिभि बन्द गर्नुहोस्!"
यसले अत्यन्तै अचम्म लाग्दछ तर अहिंसात्मक चीजहरूको बीचमा दुखी चीजहरू सम्भव हुन सक्छ। विगतमा, थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि व्यक्तिगत मतभेद वा प्राथमिकताको कारणले गर्दा कोठाको साथ शारीरिक संघर्षमा पार्यो।
रूममेन्ट (हरु) संग निपटने
तपाईंको रूममेट साथ कसरी प्राप्त गर्ने? तपाईंको रूममेट समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने? यहाँ केही सुझावहरू छन्:
एक राम्रो रूममेट कसरी पत्ता लगाउनुहोस्
सात सामान्य रूममेट समस्याहरू र उनीहरूको समाधान कसरी गर्ने
कसरी5सामान्य रूममेट समस्याहरू ह्यान्डल गर्ने? (यदि तपाईं परिसर बन्द गर्नुहुन्छ)